भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई भूटान र माल्दिभ्ससँग तुलना गर्दै यस्तो भनेपछि… – Sapana Sanjal
July 31, 2021 269
Sapana Sanjal : काठमाडौं-नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूटान, मोरिसस र माल्दिभ्ससँग तुलना गरेका छन् । सामाजिक संजाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै मोदीले नेपालको तुलना भूटान, मोरिसस र माल्दिभ्ससँग गरेका हुन् ।
त्यस्तै, नेपाल-भारतबीचका मुख्य विवादबारे छलफल गर्न २०७५ फागुनमा विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि विज्ञ समूहको बैठक बोलाउने पालो भारतको हो । तर, नयाँ दिल्लीमा हुनुपर्ने चौंथो वार्ताको टुंगो अझै लागेको छैन ।
Prevएमसीसी अनुमोदनै नभई नुवाकोटको जग्गा अधिग्रहण कसरी भयो ?
Nextगाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात